Ahoana no hataoko mafana ny tanako sy ny tongotro rehefa mandeha bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Fanamainana tanana bisikileta - fitadiavana vahaolana
Fanamainana tanana bisikileta - fitadiavana vahaolana
Ahoana no hataoko mafana ny tanako sy ny tongotro rehefa mandeha bisikileta?
Fomba iray malaza koa, indrindra rehefa mando, ny fanaovana harona plastika manodidina azyTONGOTR'IZYhamehezana nyhafanana. Matetika,mpitaingina bisikiletysandwich ny kitapo plastika eo anelanelan'ny ba kiraro roa. Fomba iray hafa ny fametrahana ny kitapo plastika eo akaikin'ny hoditra, eo ambanin'ny soson'ny sock.18 nov Feb 2020
raha ny eritreritra ny tanana sy tongotra mangatsiaka no manakana anao tsy hidina an-dalambe amin'ity lahatsoratra ity, amin'ity lahatsoratra ity dia hanome torohevitra sy tetika vitsivitsy ianao hialana amin'ny tanana mangatsiaka sy mangatsiaka amin'ny bisikiletinao, satria manimba ny mitaingina fotsiny izany. , sa tsy izany? tena manao izany raha mbola afaka mahatsapa tsara ny tananao ianao, tonga izao ny fotoana hanomezana ny ankihiben-tànanao, lehilahy marina, andao handeha, wew wewa, lehilahy mangatsiaka izany fa maninona isika no mahazo tanana mangatsiaka Ka voajanahary ny vatantsika no manao laharam-pahamehana ny votoatintsika ka ny afaka miady amin'ny tenany ny tendrony, fa maninona? izay ny tanantsika ny tongotsika mahatsiaro mangatsiaka kokoa noho ny rivotra mangatsiaka dia avo kokoa ny rivotra no mihazakazaka mangatsiaka ianao dia ho tsapanao izao izay tena mampiseho rehefa midina avy any an-tendrombohitra ianao satria tsy mandeha an-tongotra ianao dia midika izany fa tsy miezaka mafy ianao manafana ny vatanao sy ny tendronao fa ny rivotra mangatsiaka kokoa izay midika fa hahatsapa ho mangatsiaka be ianao, ny avo kokoa ny famafanaina dia ny hafanana ho tsapanao aloha ary indrindra raha miady amin'ny hatsiaky ny rivotra ianao dia mila fonon-tànana. Eny, misy fonon-tànana an'arivony maro karazana, samy hafa ny toerany sy ny hateviny, fa ny fahazoan-dàlana hividianana fonon-tànana manokana momba ny bisikileta satria mila mahay mametaka ny kiran-tànana fonon-tànana vita amin'ny rongony izay nanaovan'ny renibeko anao Mba hamonjy azy ireo amin'ny alàlan'ny alika dia tsara ny manonona na dia afaka mahazo fonon-tànana isan-taonina aza ianao, izay natao ho an'ny mari-pana sy fepetra samihafa, ary mety ho hitanao fa safidy tsara tokoa ny fonon-tanana neoprene, natao izy ireo mitovy amin'ilay zavatra ara-materialy toy ny wetsuit ary avy eo ilay rano kely ao amin'ny fonon-tànanao ary noho izany dia hanafana ny rano ny tananao ary hitazona ny tananao ho tsara sy mafana Aza apetraka ny fonon-tànana rehefa mangatsiaka ny tananao satria tsy asa Ataoko mangatsiaka ny tananao Tsy ho tony kokoa ny tananao, eny, soa fa ck manana fonon-tànana somary manify isika satria tsy mangatsiaka loatra izay mety tsara amin'ny maripanan'ny andro maty, andao tsy hanadino ny tongotsika izao fa afaka mahazo vitsivitsy ianao manokana w kiraro iraisana fantatra amin'ny anarana hoe booty, izay manana toetra mampiavaka azy, nefa koa Layer tsy misy rano ivelany izay afaka miaro anao amin'ny rano eny an-dàlana, fa koa ny fihenan'ny maripana, fa ny fitiavana bisikileta koa dia ny hazakazaka am-bisikileta ankehitriny sosona izay mamaky ny tampon'ny kiraro bisikileta manome anao insulation kely kokoa Ankehitriny dia an-jatony, na tsy an'arivony, ny fomba akanjo tsy mitovy, koa misafidy iray izay mety amin'ny toetrandro halehanao sy ny mari-pana aminao dia mitaingina ary alohan'ny hahalalanao azy dia hanana tongotra mafana ianao raha mampiasa kiraro bisikileta mahazatra izay hataonao amin'ny fahavaratra. Soso-kevitra tsara ny manisy fantson-drivotra mba tsy hidiran'ny rivotra mangatsiaka rehetra amin'ny kiraronao mankany amin'ny tongotrao sy um ianao, manantena ny hisorohana ny rantsan-tongotra mangatsiaka, izay tendrony ambony iray hafa indrindra amin'ny familiana amin'ny toetrandro mando na izany aza apetraho eo ambanin'ny rakotra kiraronao ny havokavokao na ny tongotrao hanafana toy izany hamelana ny orana, fa ny lehilahy milamina eto, tsy dia tsara loatra, tsy dia milay, tsy hoe milay, fa mafana kosa eny fiasa momba ny fijery estetika fa tsy tena izy ka avelanao toy izany fa tsy tena orana, noho izany dia mieritreritra aho fa tsy maninona okay ara-drariny andeha ho avy ianao afaka mampiasa vola ba kiraro manokana amin'ny ririnina izay mety matevina sy avo kokoa ny tongotrao hampafana ny kitrokelyo koa, mba ho hitanao fa nanambola kiraro ririnina kliobako aho satria ba kiraro Noely, tsy mafana ny resaka ririnina, tsara tondro, fa hataoko avo roa heny amin'ny ba kiraro itako manana hevitra tsara roa tsiroaroa amin'ity indray mitoraka ity ka raha miala tsiny ianao ary izaho dia hanafy kiraro kiraro fanampiny.
Misy ihany koa ny torohevitra vitsivitsy izay azo ampiharina rehefa mitaingina ary ny iray amin'ireo toro-hevitra ambony ireo dia ny famaha ny kiraro mitaingin-tsoavaly mba hijanonany amin'ny famerana ny fivezivezena amin'ny rantsan-tongotra mba hahafahan'ny ra mafana mafana mankamin'ny tendrony manaikitra kokoa. Toy izany koa ny fonon-tànanao sy ny tananao. Te hitondra fonon-tànana roa ianao izay tsy tery loatra ka mbola afaka mivezivezy eo am-pelatananao ny ra, ary koa rakotra ivelany tsara izay afaka tafiditra amin'ny fonon-tànana amin'ny alàlan'ny fonon-tànanao, oh tiako ity tendrony ambony ity.
Ny zavatra hafa tsy tokony ho adino dia ny karazana mitaingina ataonao, mety ve ny mandeha an-dàlana tokana izay tsy mitaky ezaka be, sa tena ho henjana? Hitahiry fihenam-po ianao raha mora kokoa ny mandeha, maka fonon-tànana matevina kokoa ary raha sarotra ny mitaingina anao dia mety hiala amin'ny setroka manify ianao, arakaraka ny ahamafisanao ny hafanana anao, ka eritrereto izany Karazana mitaingina inona no ataonao amin'ilay karazana mitaingina antsika dia somary malefaka kokoa noho ny volon-koditra maivana kokoa noho izany, ka nandeha ho an'ilay matevina kokoa ny fonon-tànana matevina izay mety hanaikitra anao koa mety hisy fiantraikany amin'ny hatsiaka mahazo ny tananao eny izao dia zakanao izao mandroso amin'ity, fa rehefa manana rano indray mitete avy amin'ny lasely mankany amin'ny bara ianao dia hisy ny lanjanao bebe kokoa eny an-tananao, izay midika fanerena bebe kokoa, ka hahatonga azy io ho sarotra kokoa amin'ny fivezivezena hahatratra ny tendron'ny rantsan-tànanao. Ka raha tena sahirana ianao, andramo alao ny zoro mba hampiakarana ambony ny bara hahafahanao manala tsindry eny an-tananao ary antenaina hatrany amin'ny rantsantananao ny ranao. Ilaina ihany koa ny mandinika fa raha mihazona mafy ny kofehinao ianao dia hamorona tsindry bebe kokoa, ka ho sarotra kokoa amin'ny ranao ny manakatra ny tendron'ny rantsan-tananao rehefa mipetraka eo amin'ny bara ianao, ka farany nefa tsy azo atao, tazomy ho mafana ny fotony, izany mety miaraka amina palitao misy rivotra na eny amin'ny tantera-drano aza, tena ilaina ny mitazona azy ho madio sy mafana ary mafana ny tongotrao sy ny tananao, io no ho an'ireo toro-hevitra ambony hataonay mba hanafana ny tananao sy ny tongotrao rehefa tianao ity lahatsoratra ity azafady mba omeo ankihiben-tanana lehibe izany ary antenaiko fa hafanainao hatrany ny tanako amiko amin'ny manaraka azy io ianao yeah tsy hisy ho rava amin'ny tongotra mangatsiaka intsony ny mitaingina anao ary tsy hanao veloma ny tanana marenina intsony ary tongasoa anao oh
Mihazona ny tananao ve ny fonon-tànana bisikileta?
Mafana ny tananaomiakatra toy nynymitaingina, indrindra raha mandeha mavitrika ianao, toy nynyra mandeha pumpe manodidinanytsara kokoa ny vatana. SASANYbisikileta afakamandefitra manifyfonon-tànana bisikiletaamin'ny ririnina noho izany antony izany.Bisikiletamanafanany tananaomahomby kokoa rahafonon-tànanao, na inona na inonanyhateviny, diamafanaary maina manomboka.6 des 2017
(Rush amin'ny rivotra) - Antony lehibe mahatonga anao mangatsiaka ny tanana sy ny tongotrao satria ratsy ny fivezivezenao, ka alao antoka fa manana kapa kokoa ianao ary tsy cuffs tery loatra hamela ny rà hihazakazaka avy amin'ny fotony mankany amin'ny rantsantanana sy ny rantsan-tongotra. Manetsiketsika ny sakaizanao ve ianao? - Miezaka koa aho.
Ahetsiketsika, alentika! (Mozika rock) Kiraro bisikileta be dia be any no natao hitazomana ny tongotrao mandritra ny andro fahavaratra, izay midika fa mangatsiaka sy lena be ny rivotra. Azonao atao ny mampiasa fantsona fantsona vitsivitsy hanaovana an'io.
Afatory toy ny, ny tiako holazaina, fa tsy mahafatifaty izany, fa azonao atao koa ny mamoaka ny insole ary misaron-doha amin'ny vavahady amin'ny faladiany miaraka amina akanjo lava ary hanana tongotra mafana tsara ianao. Tonga lafatra amin'ny ririnina. Marina, raha mijanona ny kasety ataoko. (Mihamafy ny clasp) (mozika rock) - Misy karazana fonon-tànana maro samihafa satria samy hafa ny haben'ny tananao, saingy tsy maintsy ilaina ny manana kitanao hiasa amin'ny toe-javatra kasainao haleha.
Ankehitriny eto Eropa dia afaka miala amin'ny fonon-tànana ririnina tsara tarehy fotsiny isika amin'ny ankapobeny. Satria tsy izany rehetra izany dia tena mangatsiaka eto, indrindra any Angletera. Ary amin'ny ankapobeny, ny maripana dia tsy miova firy na oviana na oviana. Fa raha mipetraka amin'ny toerana misy fahasahiranana be ianao, na misy fiovana be kokoa ny mari-pana mandritra ny andro, dia mety mila mandinika zavatra hafa ianao ho claw, na liner.
Manaova fonon-tànana tery eo ambanin'ny fonon-tànana ririnina matevina ahafahanao manaisotra raha miova ny mari-pana ary miakatra ny andro mandritra ny andro na raha lena ny tananao dia soloina liner hafa amin'ny tapaky ny taona (strum bas) Tsy mahagaga raha andro mando sy mangatsiaka eto Angletera ary raha te hijaly amin'ny tanana mando sy mangatsiaka ianao dia tena hanampy anao ity hack ity ary ao anatin'izany ny fonosana fonon-tanana vita amin'ny fonon-tanana rehefa manomana ny bisikiletanao na mametraka azy ao am-paosinao any aoriana ary rehefa orana ianao mahazo fonon-tànana lena, apetaho ary midika izany fa mety ho lena ny fonon-tànanao, fa ny tananao kosa ho maina foana nefa manana tanana mangatsiaka tokoa amin'ny ritter Raha manadino ny fonon-tànanao ianao dia afaka miditra any amin'ny tobin-tsolika foana na tobin-tsolika, ampitafiao izy ireo, dadatoanao i Bob, ao no anananao. Tsara, mafana sy maina tanana. (Mozika orkesitra mahafaly) - Ho an'ny voromahery - Eo afovoanao, mety ho tsikaritrareo fa tsy tena nanao ny ba kiraroko fahavaratra aho androany, fa ba kiraro ririnina mafana.
Izy ireo dia manana fananana tsy misy rivotra ary tsy tantera-drano, ary izy ireo no safidiko voalohany, na izany aza, raha tsy manana kiraro amin'ny ririnina ianao na maika mihazakazaka ary te-hitafy kiraro fahavaratra, ny fampitomboana avo roa heny ny sosona dia fanalahidy hampafana anao. Satria manidy ny rivotra mafana eo anelanelan'ny sosona tsirairay ianao. Ny hany zavatra tsy tokony ho adino rehefa mitafy sosona fanampiny amin'ny tongotrao dia ny hoe raha manana kiraro tery manokana ianao dia mety manana olana amin'ny fampidirana ny tongotrao amin'ny kiraronao. Mendrika ny manana kiraro faharoa ho an'ny ririnina, izay angamba haben'ny antsasaky ny habeny ihany. (Mitohy ny mozika Orchestral) - Fomba fanao nentim-paharazana GCN hitazomana ny tongotrao ho mafana sy hafanana hampiasa foil aluminium.
Aluminium foil dia insulator tsara tokoa ka izany no antony ampiasana azy amin'ny fandrahoana sakafo. Hamarino tsara fa mahazo sombin-javatra lehibe toa izany ianao, afatory manodidina ny tongotrao ary tokony hitandrina an'io tongotrao io ny hafanana mahafinaritra sy mafana izay voafandrika ao anaty kiraronao. Apetaho ny kiraronao ary ento avy eo ny kapaotinao raha misy ianao ary eo no anananao! Tongotra mahafinaritra sy mafana ary voarozy.
Mety tsara amin'ny maripana rehetra raha tsy mangatsiaka loatra vao afaka mivoaka. (chuckles) (strummers gitara elektrika) - Rehefa mitady hacks mba hafana sy ho maina amin'ny ririnina, ny sasany amin'ireo tsotra indrindra no mahomby indrindra ary azo antoka fa mora vidy indrindra. Sarimihetsika voafidy azo voafantina.
Izy io dia azo vidiana mora vidy amin'ny fivarotana enta-madinika misy anao, ary mora be ampiasaina. Fonosinao fotsiny ny tongotrao manontolo ary ny zavatra mahafinaritra amin'ny fametahana sarimihetsika dia ny miraikitra amin'ny tenany ka tsy mila mampiasa be loatra koa ianao. Sarony fotsiny ny tongotrao sy ny kitrokelinao rehefa manao akanjo lava ary avy eo manety lavaka ho an'ny vavoninao ary manana tongotra mitarika amin'ny ranomasina sy tsy voatsimbina amin'ny ranomasina ianao.
Tandremo fa hitsembo kely ny tongotrao, fa farafaharatsiny tsy hangatsiaka izany. (Mozika rock) - Iray amin'ireo andro ririnina tena mangatsiaka io, ary ny fonon-tànanao dia aza manao fikafika fotsiny, mitazona ny tananao ho mafana araka izay itiavanao azy. Eny, manana fikafika tena tsara aho mba hanakanana ny tananao tsy hangatsiaka.
Natao hitsaboana ny hozatra amin'ny fanaintainana sy fanaintainana izany, fa azonao atao ny mividy izany amin'ny fivarotana ivelany na lasy ary samy hafa ny habeny ary maharitra mandritra ny adiny roa izy ireo ary afaka mitazona ny tananao tsy ho lasa vongan-dranomandry . Ny azonao atao dia ny mamiravira ny lamosinao, mametaka azy amin'ny tananao, avereno ao anaty fonon-tànanao, azonao antoka fa tsy mampiato ny fikorianan'ny ranao ny volanao. Ka tazomy izany rà mafana sy mafana rehetra izany avy amin'ny fikoriananao mankany amin'ny tananao dia tokony hahatsapa tasy mafana tsara ianao eny an-tananao izay hitazona azy ho tsara sy hafana mandra-pahatonganao mody ary hipetraka mafy eo akaikin'ny afo) Eny.
Oh, tsara izany. Woo! (Rock Music) - Raha toa ka tsy misy daty ireo hacks ririnina rehetra ireo dia zavatra iray sisa no hatao ary ny mampiasa vola amin'ny fitaovam-pandehanan'ny ririnina izay natao manokana ho an'ny toe-javatra ratsy indrindra resahiko momba ny lanezy, ranomandry , oram-be ary hafanana ambanin'ny zero. Ohatra, ireto booty Fizik Artica R5 ireto, izay tsy hataoko afa-tsy amin'ny toe-javatra faran'izay ratsy indrindra, dia ataovy mafana sy maina foana ny tongotrao amin'ny ankamaroan'ny fiara ratsy indrindra, misy sarina taratra taratra, zipper iray voaisy tombo-kase ary volon'ondry ao anatiny izay midika fa anao izy ireo Ataovy mafana sy maina foana ny tongotra amin'ny toe-javatra azo eritreretina rehetra.
Ny olana fotsiny dia mety tsy tianao ny mitaingina fepetra toy izao. - Ankehitriny manantena izahay fa ireo hacks rehetra ireo dia nanampy anao hitazona ny tananao sy ny tongotrao ho tsara sy mafana amin'ireo mitaingina ririnina ireo. - Raha tianao ity lahatsoratra ity dia omeo thumbs up lehibe ary ampahafantaro anay raha mieritreritra ianao fa tsy nisy n'inona n'inona .- Ary raha mila lahatsoratra misimisy kokoa, tsindrio eo satria mando sy mangatsiaka, ary tsy maintsy mandeha izahay, don ' isika? - Oh, manao izany izahay - Ugh.
Ahoana no anafanan'ny mpitaingina bisikileta ny tongony amin'ny ririnina?
Ny fomba nentim-paharazana an'nyfitandremananymafana tongotra mandritra ny bisikiletadia ny manampy insulate ambonin'izy ireo. Overshoes dia miainga amin'ny safidy fanakanana rivotra maivana ka hatramin'ny maodely mavesatra vita amin'ny fitaovana tantera-drano.
Hihazona ny tongotrao ve ny foza aluminium?
Toa adala nefa eny,foil vita amin'ny firakaamin'nynykiraro. Hatramin'ny ankamaroan'ny vatanahafananavery amin'ny lohany aryTONGOTR'IZY, tsy maintsytazomy ny tongotraoSYmafana ny rantsan-tongotrakoa.Voaly foiltsy mitazonahafananafa ionoasa lehibe an'nymitazona hafananaao ary ny hatsiaka mivoaka. Ho an'ny fanampinyhafananaandramo fonosananyMANONTOLOtongotraamin'nyfoil vita amin'ny firaka.22 jan. Oktobra 2018
very lanja haingana
Fa maninona no tongotro ny tongotro rehefa mandeha bisikileta?
NYTONGOTR'IZYmivonto mandritrabisikileta, noho ny fitomboan'ny famatsian-dra notakin'ny asan'ny hozatra. Matetika, atleta misy rantsan-tongotrafahafahana mahatsapamanao kiraro kely loatra, na mihidy mafy loatra eo am-piandohan'ny diany, izay mametra ny famatsian-dra ny hozatra, ka nahatonga nyfahafahana mahatsapa.18 desambra 2017
Ahoana ny hatsiaka mamirifiry loatra noho ny bisikileta?
Ho an'ny sasanympitaingina bisikilety, mitaingina abisikiletaamin'ny mari-pana rehetra ambanin'ny 50 degre Fahrenheit diatena mangatsiaka. Ho an'ity tsanganana ity, 'tena mangatsiaka'dia faritana eto ambany 32 degre.
Mihazona ny tongotrao ve ny fanaovana ba kiraro roa?
Araka ny filazan'i Joshua Kaye, podiatrist any LA,manao ba kiraro roanyhafana hatrany ny tongotraodia fanazaran-tena amin'ny zava-poana. 'Ny faharoaMiaraka tsiroaroamanerytongotrao, manapaka ny fivezivezena sy ny fanaovanany tongotraomangatsiaka kokoa noho izy ireo miaraka amin'ny mpitovoMiaraka tsiroaroa.30.01.2018
Iza amin'ny sisin'ny foil aluminium no misy poizina?
Koa satriaaluminium foilmanana mamiratralafinyary malokalafiny, loharanom-pahandroana maro no milaza fa rehefa mahandro sakafo nofonosina na norakofanaaluminium foil, ny mamiratralafinytokony hidina, miatrika ny sakafo, ary ny matrokalafinymiakatra19 Okt 2016
Azo antoka ve ny mamono ny tongotrao amin'ny alim-pito alimo?
Eny, afaka mihazakazaka ianaonyny fizotran'ny fanasitranana rehefa marary amin'ny sery na gripa ianao. Tsotra ny fizotrany, saingy mitaky kely fotsiny izanyaluminium foil. Atombohy amin'nyfonosina ny tongotraoamin'ny sosona 5-7 an'nyfoil. Omeony tongotraofiatoana 2 ora, ary avy eomamonomisy sosona 5-7 hafa manodidinany tongotraoadiny iray.
Sarotra kokoa ve ny bisikileta amin'ny andro mangatsiaka?
Ny valinteny nomena dia nahitana ny hakitroky ny rivotra (matevina kokoa izy io ary miteraka fanoherana aerodynamika bebe kokoa aomaripana mangatsiaka kokoa), kodiarana kodiarana (mety mihisatra miadana ny kodiarana rehefa misy izy ireohatsiaka), ary ny vatan'olombelona (tsy mandeha tsara ny hozatra amin'nyhatsiaka).
Ratsy ho an'ny bisikileta ve ny hatsiaka?
Mangatsiakany mari-pana, amin'ny azy manokana, dia tsy manimba abisikileta. Ohatra, mitondra abisikiletaavy amin'nyhatsiakany rivotra ivelany mankany amin'ny rivotra mafana ao anaty dia mety hiteraka hamandoana ao anatiny ao anaty ny fefy, izay mety hitarika harafesina.3 feb 2012
Inona no azoko ampiasaina mba hanafana ny tanako amin'ny bisikileta?
Raha manao fitsangantsanganana moramora sy mahitsy fotsiny ianao amin'ny làlan'ny bisikileta, dia hitazona ny tananao ho mafana kokoa noho ny fonon-tànana ny mittens. Fa ho an'ny mitaingina matotra izay mitaky fanovana sy fanosehana be dia be, ny fonon-tànana dia hanome anao ny dexterity ilainao.
Ahoana no hitazomana ny tananao amin'ny ririnina?
Angamba mahazo fiarovan-doha aero miaraka amin'ny lavaka kely kokoa amin'ny ririnina. Hanafana ny lohanao izany ary hanampy kely rehefa miady amin'ny tadin-drivotra Arctic ianao. Ny fankatoavana ny fomba fanaovana layering amin'ny fonon-tànanao dia mampitombo ny fahafaha-manao raha miova ny toe-javatra rehefa mivoaka ianao ary, satria misy rivotra mafana eo anelanelan'ny sosona tsirairay, dia hafana izy ireo.
Inona no hotadiavina amin'ny hafanana tanana?
Ny fanafanana tanana tsara dia kely kely hametrahana ny fonon-tànanao na ny paosinao. Mahazo aina ihany koa ny tsy manakana ny fizahana ivelany. Fa ahoana no ahalalanao hoe inona avy ireo fanafanana tanana tsara indrindra ho anao? Eo no idiranay! Amin'ity torolàlana ity dia hitety anao izay hotadiavina izahay rehefa mividy fanafanana tanana.